» ज्योति लाइफको छलाङः बीमा शुल्क १०० प्रतिशत बढ्दा अरु सूचक कस्ता ?
२०७८ असार ०५, शनिबार
ज्योति लाइफको छलाङः बीमा शुल्क १०० प्रतिशत बढ्दा अरु सूचक कस्ता ?
२०७८ बैशाख १३, सोमबार १२:२८
काठमाडौं । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालु आवको चैत मसान्त अवधीमा आफ्नो खुद बीमा शुल्क १०० प्रतिशत बढाउन सफल भएको छ । गत आवको चैत मसान्त सम्मकाे अधवीमा एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको कम्पनीले चालु आवको सोही अवधीमा त्यस्तो बीमा शुल्क २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुर्याएको हो ।
२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जीवन बीमा कोष पनि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको भएको छ । जबकी गत आवको चैत मसान्त सम्ममा कम्पनीको जीवन बीमा कोषमा जम्मा एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । त्यसरी हेर्दा ज्योति लाइफको जीवन बीमा कोष १४९.२८ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । कम्पनीको जगेडा तथा कोषमा ६० करोड रहेको छ ।
कम्पनीले बीमालेख धितोमा ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । भने दिर्घकालिन लगानी तथा कर्जा ४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । गत आवको चैत मसान्त अवधीमा दिर्घकालिन लगानी तथा कर्जाको आकार जम्मा २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेकाे थियो ।
कम्पनीले हालसम्म ५ अर्ब ४७ करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेको देखिन्छ । ज्योति लाइफले पछिल्लो तीन महिनमा २५ हजार एक सय ५० वटा नयाँ बीमालेख बिक्रि गरेको छ । कम्पनीको हालसम्म ८३ हजार एक सय ६७ वटा बीमालेख बिक्रि गरेको देखिन्छ । जुन गत आवको चैत मसान्त अवधीमा ४१ हजार एक सय २६ वटा थियो ।
कम्पनीले हाल प्रति हजार ४३ रुपैयाँदेखि ७५ रुपैयाँसम्म बार्षिक बोनस दिँदै आएको छ । ज्योति लाइफको प्रति सेयर आम्दानी ७.३२ रुपैयाँ छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १३०.३३ रुपैयाँ रहेको छ । यस अवधिसम्ममा कम्पनीले १० करोड ११ लाख ५२ हजार रुपैयाँ कुल दाबी भुक्तानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ८९ लाख ५९ हजार कुल दाबी भुक्तानी गरेको थियो ।
चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको नाफा १२ करोड ७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीको नाफा ११ करोड ४१ रुपैयाँ थियो ।
बोर्डको सूची प्रभावः बाउन्स ब्याक हुन सकेन सेयर बजार, कारोबार रकम पनि लगातार घट्दै
बजारको रफ्तार मात्र हेरेर लगानी गर्ने अल्पकालीन लगानीकर्तालाई अडानी ग्रुपले सिकाएको पाठ !
एकै वर्ष १६२९ मेगावाट विद्युत थपिँदै, ट्रान्समिसन लाइनको समस्या समाधान गर्न कार्यदल
निषेधाज्ञा नसकिँदै सरकारले निकाल्यो कर तिर्ने सूचना, नतिरे जरिवाना
धितोपत्र बोर्डको सूची प्रभावः १३३ कम्पनीका सेयर मुल्य घटे, नेप्सेमा ५२ अंकको गिरावट
पशुपति क्षेत्रका खुला स्थानमा गुर्जो रोप्ने काम सुरू
बाढी पहिरोले डेढ दर्जन जलविद्युत आयोजना प्रभावित, अरबौंको क्षति
उपल्लो डोल्पामा छाक टार्ने अन्न पनि छैन